replica မျက်မှန် - Clothes : ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း (-55%)
သငျသညျနာရီ, ပိုက်ဆံအိတ်, ဖိနပ်သို့မဟုတ်အိတ်ကြီးပုံတူကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား?
သငျသညျလူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကြီးပုံတူတစ်ခုချမ်းသာကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေနေပါသလား? ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့်အခါသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်ဆောင်းပါးတွေထဲကနေအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး, legit နှင့်လာမယ့်ခံယူမညျဖွစျကွောငျးသေချာအောင်လိုသလား? သငျသညျနာရီ, ပိုက်ဆံအိတ်, ဖိနပ်သို့မဟုတ်အိတ်ကြီးပုံတူကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား? သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာပါတယ်ထက်!
ပိုလနျဈေးကွက်တွင်လူသိထုတ်ကုန်ကြီးပုံတူကြီးမားခြင်းနှင့် undying လူကြိုက်များပျော်မွေ့။ မိမိအမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းနေဆဲသာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်မူလကနေလုံးဝအဘယ်သူမျှမကွဲပြားတဲ့အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအနေဖြင့်သူတို့ပင်အကြိမ်အနည်းငယ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းများအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, ထိုအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအိတ်, ဖိနပ်, အဝတ်နှင့်များစွာသောအခြားထုတ်ကုန်များကြီးပုံတူနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စတိုးဆိုင်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် - ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးပို့အခြေအနေများ, ကြွယ်ဝသောကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှု။
စျေးကွက်၏ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ဝယ်လက်များ၏မျှော်လင့်ချက်များ သိ. သာကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့အရည်အသွေး မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်နိုင်အောင်ကိုယျ့ကိုယျကိုသဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြကြောင်းရတနာ, မျက်မှန်သို့မဟုတ်နာရီကြီးပုံတူ, ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုကိုအဆိုပါအသေးစိတ်များနှင့်ပြည့်စုံသောကမ်းလှမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ရဲ့ website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် Ray ဘန်ကီမွန်းက, Versace, Miu miu, Rolex, Emporio Armani နှင့် Bvlgari, Piaget သို့မဟုတ် Tiffany & Co ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်များပါဝင်သည်
မျက်မှန်အမြင်အာရုံသင့်ရဲ့ကြည့်, မျက်နှာ, အရာသိသိသာသာအလွန်လူတစ်ဦး၏ရုပ်ပုံလွှာကိုပြောင်းလဲကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအရိုးရှင်းဆုံးဖက်ရှင် accessories များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဝယ်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အကြော့ရှင်းဆိုလိုတာကအမှတ်တံဆိပ်မျက်မှန်ဝတ်ဆင်, ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ ရာပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာကဲ့သို့ကြီးမားသောတစ်ခုစရိတ်မတတ်နိုင်သောသူတို့အဘို့, မျိုးစုံ Ray ဘန်ကီမွန်းကအဲဒီမှာစောင့်ဆိုင်းမိတ္တူပွားထဲ glasses အဖြစ် Chrome ကိုနှလုံး, DITA, Glassino သို့မဟုတ် Miu Miu ။ ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ကြည့် ယူ. သင်တို့အဘို့စံပြမထိုက်မတန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအားလုံးသည်မျက်မှန်မိတ္တူပွားထဲကတော့အစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများ, အသေးဆုံးကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်နှင့်အကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုဝယ်ယူသောအခါသင်သည်သူတို့ကြော့ကိုကြည့်ပေမယ့်သူတို့ကမူရင်းကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဦးမည်သာခနြိုငျအဘယ်ကြောင့်, ထိုပါပဲ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်: ဒါကမသက်ဆိုင်သင်တစ်ဦး Versace ပုံတူများကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ၏, ထိုအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်မှု, အသေးဆုံးကအသေးစိတ်နှင့်အကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုခြင်းမှအာရုံစူးစိုက်မှု, Gucci မော်ဒယ်များ, စူပါသို့မဟုတ် Thom ဘရောင်း၏အမှတ်တံဆိပ်သည်မော်ဒယ်စိုးရိမ် တူညီတဲ့အရည်အသွေးသည်။
ကျနော်တို့ https://get2lux.cn/en/123-glasses မှာ, အခုအပြည့်အဝမရရှိနိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ် မှာ, အခုအပြည့်အဝမရရှိနိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်
ယောက်ျားရဲ့အနှငျ့အမြိုးသမီးရဲ့ garderobe အတွက် accessories များအများဆုံးလျှော့တွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြောင်းမေးတိုင်း modist, မဆိုင်းမတွ, သူတို့ပိုက်ဆံအိတ်နေထူးမည်။ ကျနော်တို့ဖက်ရှင်အဝတ်, ရတနာသို့မဟုတ်နေကာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သော်လည်းအမှန်တကယ်သည်, ပိုက်ဆံအိတ်အရေးကြီးသောအဖြစ်မထင်ထားဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်မိတ္တူပွားထဲစတိုးဆိုင်သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်မူရင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူအံ့သြသွားကြောင်း, ဖက်ရှင်ဂန္နှင့်ခေတ်သစ်မော်ဒယ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖွငျ့ဤလမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကူညီပေးသည်။
သငျသညျယူဆနိုင်ကြောင်းအဖြစ်ပိုက်ဆံအိတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ရှိသမျှရှိနေသော်လည်းအဖြစ်အများအပြားအမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်မဟုတ်။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာလူတို့အားပစ်မှတ်ထားစျေးကွက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သူ Miu မိုင်, အမင်းသမီး '' ပိုက်ဆံအိတ်၏ဒီဇိုင်းနှင့် Louis Vuitton အတွက်အထူးပြုတဲ့ထုတ်လုပ်သူများ၏ပုံတူဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်း၌သငျ Chanel, Gucci နှင့်ခရစ်ယာန် Louboutin အပါအဝင်လွန်းသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အများအပြားအခန်းနှင့်အတူပိုမိုစုံလင်လာမော်ဒယ်များ, ကြော့ပြီးအလုပ်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်မိတ္တူပွားထဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်တပြင်လုံးကိုဈေးကွက်ထဲမှာကသူတို့ကိုမူထူးခြားတဲ့စေသော features တွေပါ, နူးညံ့သိမ်မွေ့သော SNAP သို့မဟုတ်မမြင်ရတဲ့သံလိုက်နှင့်အတူပိတ်လိုက်တယ်။
နှိုင်းယှဉ်အရည်အသွေးနှင့်တစ်ဦးဿုံဆင်တူအသွင်အပြင်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်ဖိနပ်၏ပုံတူယခုမူရင်းကုန်ပစ္စည်းများအားအစားထိုးသောအများဆုံးဝယ်ယူထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်ဗေဒနှင့်လက်ရာများ၏တိကျအဖြစ်အလွန်မြင့်မားကြာရှည်ခံမှု, ခုခံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖိနပ်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏နှစ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးထားတယ်။ Burberry ငှာ Prada, Gucci, Hermes သို့မဟုတ် Chloe နီးပါးချက်ချင်းရောင်းထွက်ရရှိကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဝယ်ယူတပတ်ကနေရက်သတ္တပတ်မှလက်တွေ့ကျကျပေါက်နှင့်အတူကျေနပ်လူများ၏အရေအတွက်ကိုဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့အပါဆုံးဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဒီဇိုင်နာများကနေလာမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြွယ်ဝသောနှင့်ကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းမှုကို, ဖန်တီးခဲ့သည်။ သငျသညျ Gucci, Prada သို့မဟုတ် YSL ထံမှဤနေရာတွင် LV ဖိနပ်ငှာ Isabel Marant နှင့် Givenchy ဖိနပ်, ဒါပေမယ့်လည်းမော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဆုံးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများ, အသေးဆုံးကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်, ပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကြွယ်ဝသောစုဆောင်းမှုကလွယ်ကူသငျသညျနှစျပေါငျးမြားစှာကြာရှည်မည်ဿုံမဆိုမတ်မတ်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုဖိနပ်ကိုရှာဖွေဘို့ငါဖြစ်စေမည်။ ငါတို့အားဖြင့်ရောင်းချဖိနပ်မိတ္တူပွားထဲ - မသက်ဆိုင်ရှေးခယျြသောပုံစံသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်နာများ - ဝယ်ယူအတူအောင်မြင်သောငွေပေးငွေယူ, အဆင်ပြေလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စည်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရည်အသွေးပိုကောင်းမိတ္တူပွားထဲအသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့အဝတ်ကိုအသိအမှတျပွုဘယ်လိုနေသလဲ? အင်တာနက်ပေါ်ရှိမိတ္တူပွားထဲများ၏ဝယ်ယူ, ဥပဒေရေးရာလုံခြုံပြီးအစာရှောင်ခြင်းလား? နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများ zlotys ရာပေါင်းများစွာမှတက်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားစေခြင်းငှါသော်လည်း, မိတ္တူပွားထဲအစားမူရင်းဝယ်ယူရကျိုးနပ်ပါသနည်း ဤသူအပေါင်းတို့သည်မေးခွန်းများကိုကျွန်တော်အားရင်းနှီးခင်မင်စွာသင်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကြှနျတျောတို့၏အဝတ်အစားပုံတူစတိုးဆိုင်ကပြန်ဖြေကြပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, အဝတ်အစားကြီးပုံတူကိုဝယ်ယူအဓိကပြဿနာသို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုမျှမက, ထိုကဲ့သို့သောအဝတ်များ၏အရည်အသွေးမူရင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မှနှိုင်းယှဉ်သောကွောငျ့တစ်ဝက်ကျော်လူဦးရေမိတ္တူပွားထဲဝတ်ထားသည်။ YLS အလက်ဇန္ဒား Mqueen, Emporio Armani နှင့် Kenzo ၏ပုံတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာရရှိနိုင်ပါ၏ ငါတို့သည်လည်း Chloe, Louis Vuitton နှင့် Moschino ကနေအဝတ်ကြွယ်ဝသော collection များကိုရှိသည်။ အဆိုပါပညာရှင်ပီသစွာ, ကြီးမားတဲ့အမြို့မြို့တို့မှအငယ်နှင့်ခေတ်သစ်ဖောက်သည်များအတွက်အထူးသဖြင့်ရှေးခယျြထားတဲ့ Givenchy မှ Gucci ပုံတူများနှင့်အဝတ်အစားကိုဖန်ဆင်းအလွန်လူကြိုက်များကြသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤလင့်ခ် https://get2lux.cn/en/115-clothing မှာတွေ့လိမ့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်၏အသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားအားပေး မှာတွေ့လိမ့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်၏အသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားအားပေး
Chanel, Diora, Louis Vuitton ကနေလက်ကောက်ကနေလည်ဆွဲထံမှပုတီး? မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့, ထိုကဲ့သို့သောသာမန်ထက်သာတစ်အလွန့်အလွန်ကျယ်ဝန်းပိုက်ဆံအိတ်သူရွေးချယ်အနည်းငယ်များအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့။ ယနေ့ Cartier, TOUS သို့မဟုတ် Piageta ကနေရတနာတစ်ဦးပုံတူလူတိုင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေမစျေးနှုန်းများနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူရရှိနိုင်မှုနှင့်အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းများရတနာမိတ္တူပွားထဲအခုအချိန်မှာပိုလန်အတွက်ခံစားနေကြသောကြီးမားသောအောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ကြောင်းအချက်များဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းပြည်အားလုံးထောင့်ကနေအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမသက်ဆိုင်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အကောင့်ချိန်ခွင်, သူတို့ကိုဝယ်ဝတ်ဆင်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှင့်စျေးနှုန်းများ၏အမျိုးမျိုးကိုလူတိုင်းကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်လည်းတတ်နိုင်မသာကြောင်းကျောက်မျက်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ က Tiffany & Co. , ပုံတူစုဆောင်းခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြောင်လူသိများဒီဇိုင်နာကနေမော်ဒယ်ကနေရတနာင်လျှင်မည်သို့ပင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုများ - ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းများမှာများနှင့်အောင်မြင်သောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံငွေပေးငွေယူတဲ့အာမခံချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီမှာကပေါ်မှာငါတို့စကားလုံးယူရိုးရှင်းစွာရတနာမိတ္တူပွားထဲအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ကြည့် ယူ. , မရရှိနိုင်ပါဘူး https://get2lux.cn/en/121-jewellery အဆိုပါလက်ကောက်အပေါ်ဝတ်ဆင် Gallantry ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, နာရီပဲအနည်းငယ်ကျော်တရာနှစ်ပေါင်းတစ်အတော်လေးအချိန်တိုအတွင်းလူသိများခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းကသူတို့တစ်တွေကွင်းဆက်မှပူးတွဲပါ, အိတ်ကပ်ထဲမှာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့သူတို့အားပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင် devices တွေကိုဘုံလူကြိုက်များခံစားအဖြစ်လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်ပတ်နာရီတစ်လုံးမိတ္တူပွားထဲနေကြသည်။ Emporio Armani, ဦး-လှေ, Rolex, ဒါပေမယ့်လည်း Audemars Piguet သို့မဟုတ် Cartier: သူတို့ကိုလူတို့တွင်သင်တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။ သူတို့အယံမူရင်းမော်ဒယ်များမကြာခဏzłotysသို့ပြောင်းလဲပြီးနောက်တစ်လေးနက်ကံဇာတာဖြစ်လာရာ, ဒေါ်လာတောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရိုးစွန်းဒေသများမှအကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကအလွယ်တကူမရရှိနိုင်သည့်မဟုတ်ဘဲမူရင်းထက်ကောင်းစွာလုပ် Rolex ငှာမှရေးဆွဲသောအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ သို့သော် unoriginal ထုတ်ကုန်အသုံးပြုအရှက်နှင့်လှောင်ပြောင်ရန်သင့်အားဖော်ထုတ်စျေးနှုန်းချိုသာအစားထိုးဝယ်ယူဘဲနေရသနည်း လုံးဝမဟုတ်ဘူး! ဦး-လှေသို့မဟုတ် TAG Heuer ကနေနာရီ၏ပုံတူရူပအတွက်ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားမှုအတွက်ဖြစ်စေမူရင်းထက်ပိုဆိုးမရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသွားနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါဖော်ပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်ယံများစွာသောအခြားအမှတ်တံဆိပ်။
အဆိုပါလက်ကောက်အပေါ်ဝတ်ဆင် Gallantry ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, နာရီပဲအနည်းငယ်ကျော်တရာနှစ်ပေါင်းတစ်အတော်လေးအချိန်တိုအတွင်းလူသိများခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းကသူတို့တစ်တွေကွင်းဆက်မှပူးတွဲပါ, အိတ်ကပ်ထဲမှာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့သူတို့အားပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင် devices တွေကိုဘုံလူကြိုက်များခံစားအဖြစ်လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်ပတ်နာရီတစ်လုံးမိတ္တူပွားထဲနေကြသည်။
Emporio Armani, ဦး-လှေ, Rolex, ဒါပေမယ့်လည်း Audemars Piguet သို့မဟုတ် Cartier: သူတို့ကိုလူတို့တွင်သင်တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။ သူတို့အယံမူရင်းမော်ဒယ်များမကြာခဏzłotysသို့ပြောင်းလဲပြီးနောက်တစ်လေးနက်ကံဇာတာဖြစ်လာရာ, ဒေါ်လာတောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရိုးစွန်းဒေသများမှအကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကအလွယ်တကူမရရှိနိုင်သည့်မဟုတ်ဘဲမူရင်းထက်ကောင်းစွာလုပ် Rolex ငှာမှရေးဆွဲသောအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ သို့သော် unoriginal ထုတ်ကုန်အသုံးပြုအရှက်နှင့်လှောင်ပြောင်ရန်သင့်အားဖော်ထုတ်စျေးနှုန်းချိုသာအစားထိုးဝယ်ယူဘဲနေရသနည်း လုံးဝမဟုတ်ဘူး! ဦး-လှေသို့မဟုတ် TAG Heuer ကနေနာရီ၏ပုံတူရူပအတွက်ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားမှုအတွက်ဖြစ်စေမူရင်းထက်ပိုဆိုးမရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသွားနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။